Soomaalida Netherlands oo dooratay Guddi cusub [SAWIRRO] - Somnieuws.com
Dallada isu-tagga ururada Soomaalida “Federatie van Somalische Associaties” ee magaceeda loo soo gaabiyo [FSAN] oo ah dallad ay ku middeysan yihiin in ka badan 45 ururo Soomaali ah, oo ka dhisan waddanka Netherlands ayaa doorasho daah-furan oo shalay ka dhacday xafiiskooda Magaalada Amsterdam ku doortay guddi ka koobban 5 xubnood oo 3 ka tirsan ay ahaayeen Guddigii hore ee dalladda.
Doorashada ka hor, ayaa maamulkii hore waxa ay ka warbixiyeen waxqabadkii dallada muddadii ay joogeen, iyagoo ku amaanay ururada xubnaha ah howlaha ay ka hayaan magaalooyinka ay ka dhisan yihiin iyo xiriirka wada-shaqeyneyd ee ay leeyihiin dallada FSAN.
Gudoomiyahii hore FSAN Cali Waare ayaa inta aysan dhicin doorashada waxa uu codsaday inuu masuuliyadda uu hayo baneenayo maadaama buu yiri loo baahan yahay isbeddel iyo wejiyo cusub, isagana uu muddo soo hayey xilkan gudoomiyaha FSAN.
Guddiga xilka ka degay ayaa soo jeediyay in 3 xubnood oo xilal kala duwan dalladda ka soo qabtay, laguna tuhmayay waaya-aragnimo dhinaca maamulka ah loo xilsaaro agaasinka doorashada, waxeyna kala ahaayeen C/kariin, Mahad & Iikar.
Guddiga doorashada ayaa soo jeediyay in 9-ka musharax ee u tartamayay ka mid noqoshada guddiga FSAN midkiiba la siiyo fursad 3 daqiiqo ah, oo uu ku sharaxayo khibradiisa & haddii xilkaasi loo doorto waxa uu dalladda ku soo kordhin karo, iyada oo xubnihii ka socday ururada na fursad loo siiyay in ay su’aalo weydiin karaan.
19-kii xubnood ee ka socday ururada soo buuxiyay shuraadaha codbixinta ayaa u codeeyay sagaalkii musharax ee la doonayay in laga soo xusho 5 xubnood, waxaana natiijadii doorashadu ku soo idlaatay:
1] Maxamed Cabdullaahi [Askari] wuxuu helay 12 cod
2] Maxamed Cusmaan [Guurre] wuxuu helay 9 cod.
3] C/shakuur Cilmi Xassan wuxuu helay 8 cod.
4] Amal Cumar waxay heshay 7 cod
5] Cabdiwahaab Yariisow wuxuu helay 6 cod
6] C/qaadir Nuune wuxuu helay 6 cod.
7] Maxamed Siciid wuxuu helay 5 cod
8] Cusmaan Abuukar wuxuu helay 4 cod
9] Shariif-ka wuxuu helay [waxba]
C/shakuur Cilmi oo doorashada ka galay kaalinta 3-aad ayaa soo jeediyay inuu u tanaasulo, ayna booskiisa soo buuxiyaan shaqsiyaad aan looga maarmin karin shaqada FSAN khibradooda daraadeed.
Sida dastuurka FSAN uu dhigayo guddiga la doortay ee 5-ta xubnood ka koobban ayaa dhexdooda iska doortay Guddoomiye, Xisaabiye & Xog-hayn, waxayna u kala doorteen:-
Maxamed C/llaahi [Askari] oo loo doortay Guddoomiyaha dalladda FSAN, C/wahaab Yariisoow ayaa noqday Xisaabiye, Amal Cumar oo loo doortay Xoghaye, halka Maxamed Cusmaan Guurre & C/qaadir Cali [Nuune] ay noqonayaan xubno ka guddiga ka tirsan.
Guddoomiyihii hore ee dalladda FSAN Cali Waare, ayaa lagaga mahadceliyay muddadii uu xilkaasi hayay waxqabadkii & dedaaladii loogu qidmeynayay mushtamaca Soomaalida ah, wuxuuna Cali u rajeeyay Guddiga cusub oo uu ku tilmaamay dad waxtar leh in ay halkaasi ka soo wadaan dedaalada ku aadan sidii da looga shaqeyn lahaa isku duubnida & wadajirka Soomaalida.